स्तन क्यान्सरबाट बच्न स्वयं परीक्षण कसरी गर्ने? - स्वास्थ्य - प्रकाशितः पुस १९, २०७७ - नारी
स्तन क्यान्सरबाट बच्न स्वयं परीक्षण कसरी गर्ने?
डा. बानिरा कार्की, स्तन क्यान्सर विशेषज्ञ
स्तन क्यान्सर धेरै नेपाली महिलामा देखिने गर्छ । नेपालमा स्क्रिनिङ कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले स्तन क्यान्सरका बिरामी रोगले विकराल रुप लिएपछि मात्र आउँछन् । बिरामी सुरुको अवस्थामा आएमा यो क्यान्सर पूर्ण रुपमा निको हुन्छ । स्तन क्यान्सरको जाँच, पहिचानका सम्बन्धमा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. बानिरा कार्की सुझावका लागि तलको भिडियो हेर्नुहोला -